ESI BULITE VIDIYO NA YANDEX DISK - YANDEX - 2019
Esi bulite vidiyo na Yandex Disk
Ị nwere ike bulite vidiyo na Yandex Disk na ụzọ abụọ: na isi peeji nke ọrụ ahụ na (ma ọ bụ) site na ngwa pụrụ iche nke Yandex na-emepụta maka mmekọrịta onye ọrụ na Disk.
Download vidiyo na ibe ọrụ
Iji budata vidiyo na ibe weebụ, ị ga-ebu ụzọ gaa ya. Ekem, ke enyọn̄ page, pịa "Download".
Na windo na-eme nchọpụta na-emepe, ị ga-achọta faịlụ achọrọ (vidiyo) wee pịa "Meghee".
N'oge usoro nbudata, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye vidiyo ndị ọzọ na ndepụta ahụ.
Download vidiyo site na ngwa Yandex Disk
Ọ bụrụ na ị nwere usoro ihe omume site na Yandex arụnyere na komputa gị, ọ ga-adịrị mfe ibudata ihe ntanetị iji ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na faịlụ vidio ebudatara bu ibu karịa 2GB, ngwa ahụ ga-eji, n'ihi na ihe nchọgharị ahụ enweghị ike ịhazi faịlụ a.
Mgbe arụnyere, ngwa ahụ na-agbakwunye nchekwa nchekwa nke Explorer nke ejikọtara ya na ihe nkesa Disk site na Intaneti. Na ya anyị ga-ebugo vidiyo anyị.
Ya mere, mepee folda Yandex Disk (a na-emepụta ụzọ dị mkpirikpi na desktọọpụ mgbe ị wụnye ihe omume ahụ) wee jee na folda nchekwa a kwadebere. "Video" (ka mma ịmepụta, maka mma nke ịchọ faịlụ).
Ugbu a, anyị na-ahụ nchịkọta nke anyị chọrọ iburu n'elu Disk wee dọrọ ya n'ime nchekwa anyị.
Akara sync (-acha anụnụ anụnụ, na udịrị awara) ga-apụta ozugbo na faịlụ ahụ, nke pụtara ịkwado na ihe nkesa.
Enwere ike nyochaa ọganihu site na ịkụnye cursor n'elu akara ngosi ihe omume ahụ na tray.
Mgbe achọtachara nbudata, akara ngosi ahụ na faịlụ ahụ ga-agbanwe na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a pụtara na ebudatara vidiyo na Yandex Disk.
Ị nwere ike ịlele ma ebugo faịlụ ahụ site na ịga na ibe ọrụ na ihe nchọgharị ahụ.
Nke a bụ nchekwa anyị "Video",
ma ebe a bụ video uploaded anyị.
Na-atụ anya ihe ọzọ? Ee, nke ahụ niile. Ndị a bụ ụzọ kachasị mfe iji bulite vidiyo na Yandex Disk.
https://termotools.com ig.termotools.com © Yandex 2019